Lubnaan: Haweeney jaariyad ah oo u dhalatay Nigeria oo lagu dhex iibinayay Facebook oo la bad baadiyay
Mogadishu - 01:08:55
Wednesday April 29, 2020 - 22:11:59 in Wararka by Super Admin
Ciidammada ammaanka waddanka Lubnaan ayaa bad baadiyay haweeney jaariyad ahayd oo u dhalatay waddanka Nigeria oo uu nin macluumaadkeeda shaqsiga ah kusoo bandhigay Facebook isagoo beecinayay, doonayayna cid ka iibsata.
Ogeysiiskan iibka ah ayaa waxa uu aad uga careysiiyay shacabka Nigeria oo durbadiiba la soo xiriiray u qaybsanaha arrimaha qurbajoogta Nigeria ee Lubnaan Abike Dabiri.
Haweeneydan oo 30 jir ah ayaa nin cinwaankiisa facebook yahay ‘Wael Jerro’ uu soo dhigay boggiisa isagoo ku qoray "Shaqaale guri oo dhalashadeedu tahay Nigeria ayaa beec ah, iyadoo ay dhan yihiin dhammaan warqadaha sharciga, da’deedu waa 30 jir, waa qof fir fircoon oo aad nadiif u ah, qiimaha 1,000 dollar".
Ciidammada ammaanka Lubnaan ayaa gacanta ku soo dhigay ninkan, iadoo haweeneydan Nigerian-ka ahna ay haatan ku sugan tahay safaaradda Nigeria ee Beirut markii la soo bad baadiyay.
Arrinta kale ee ay aadka uga caroodeen dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ah in ninkii iibinayay haweeneydan uu boggiisa ku soo bandhigay sawirka baasaboorka haweeneydan afrikaanta ah.
Hay’adda Qarammada Midoobay ayaa sheegtay in kummanaan gabdho ah oo u dhashay dalalka Afrika oo ay Nigeria ka mid tahay in laga taajiro oo kooxo burcad ah ay u ballan qaadaan shaqooyin been abuur ah ama in ay geynayaan Yurub iyo Asia, kaddibna aakhirkii xaalkoodu ku dhammaado in ay khadaamado ka noqdaan guryaha ama ay ku dambeeyaan guryaha dumarka jirkooda ka ganacsada.